Juun 2017 | RayHaber | raillynews
Bilaha: Juun 2017
Kala-guurka gaadiidka ee Soma-Kırkağaç-Akhisar Dhameystiray
Isbeddelka Gaadiidka oo Dhameystiray Soma-Kırkağaç-Akhisar: Marka la eego mashruuca isbeddelka oo ay billowday Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa sannadihii la soo dhaafay, gaadiidleyda dadweynaha ee loo adeegsan doono gaadiid u dhexeeya degmooyinka ayaa loo adeegsan jiray xaflad. Manisa weyn [More ...]
Dhameystirka isku mar ee Aydın-Denizli Wadada Wadada Wadada Weyn: Sida laga soo xigtay macluumaadka laga helay TCDD İzmir 3 Mas'uuliyiinta Agaasinka Gobolka, dhameystirka isku midka ah ee Aydın-Denizli Mashruuca Wadada Labaad ee Aydın-Denizli. [More ...]
Kaliya baasaboorada fasixi kara ee Sakarya waxaa lagu sameyn doonaa Kart54: Fatih Pistil, Madaxa Waaxda Gaadiidka ee Degmadda Sakarya, 3 wuxuu sheegay in kaliya kaararka sharci darrada ah ee la fidiyo bisha Luulyo Isniinta la sameyn doono Kart54. Pistil, yeni Xilliga cusub ee gaadiidka [More ...]
Konya - Karaman YHT Line 2 Jarfuuro Lagu Furay Gaadiidka
2 Underpass ayaa loo furay taraafikada Konya - Khadka Karaman YHT: Laba ka mid ah dariiqyada 4 ee ay dhameystireen Dowlada Hoose ee Konya ee Konya - Wadada Tareenka Xawaare Sare ee Karaman [More ...]
Bursalılar Fast Train ayaa sugi doona wax yar
Bursalılar wuxuu sugi doonaa Tareenka Xawaaraha Sare leh: Waxaan leenahay saaxiibo xiriir la leh maamulka TCDD oo yaqaana horumarka tan iyo markii uu si dhow ula socdo mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Bursa. Waqti ka waqti waca Waa maxay tareenkayaga [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee Saldhigga Badda ee Balat
Saldhigga Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Bursa wuxuu ku jiri doonaa Balat: Bursa-Yenişehir marxaladda tareenka xawaaraha sare waxaa la dhigay Balat 5 sano ka hor, laakiin TCDD waxay la kulantay xoogaa shaki gelin ah oo ku saabsan goobta Bursa Station. Tusaale ahaan nedeniyle Sababtoo ah dhararka Visoct-ka Balat [More ...]
OIZsiyada Rakaabka Isku-xirka Waddanka
Ma doonaysaa OIZs Railway Link: Turkey ayaa tareenka afar xawaaraha (HT) iyo Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) Connects line kasta oo kale. Illaa iyo hadda, dhismaha kumanaan kiiloomitir 213 kiilomitir oo khadka loo yaqaan 'NYT line' ah ayaa la soo gabagabeeyey. 3 [More ...]
Magaca xaruntan ee Akkaray wuxuu soo jiitay dareen-celin
Magaca joojintan ee Akçaray wuxuu soo jiitaa dareen-celin: Mashruuca ugu hamiga badan ee Kocaeli Magaalo-Weyne, taraam wuxuu bilaabay adeegyadiisa. Qof walba aad ayuu ugu faraxsan yahay taraamka ku dhex socda boosteejada baska iyo Sekapark. Laakiin magaca joogsiga wuxuu soo jiitaa dareen-celin wanaagsan. [More ...]
RayHaber 30.06.2017 Warbixinta Shirka
Si aad u iibsato walxaha bedelidda xargaha xakameynta tareenka (TÜLOMSAŞ) X-Ray Device, Doorka Qalabka wuxuu iibsanayaa
Taageerada dumarka 'ragga ragga' ee Japan
Taageerada haweenka ee fikradaha gaari-gacmeedka ragga ee özel Japonya ee Japan: Sahan gudaha Japan lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in dumarka intooda badani ay diirran yihiin fikirka aragtida gaariga ee ragga. Shirkadda cilmi-baarista ee Macromill-ka Japan ayaa Japan ka furtay 'wagon' wagon '. [More ...]
Miyaad riyootay tareen degdeg ah Bursa?
Ma ku riyooday inaad tareen xawaare sare ku aaddo Bursa? : Bursa, Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) wuxuu umuuqdaa inuu waxbadan sugayo si loo helo. Mashruuca "YHT", oo ah aasaaska la dhigay shan sano ka hor oo lagu ogeysiiyay shacabka Bursa, ayaa la xiray. sare [More ...]
TCDD Gaadiidka INC.
Gaadiidka TCDD Inc. wuxuu u shegayaa mashiinka mashiinka ah inuu ku dhawaaqayo magdhawga saacada masaafada: Mid ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale ee ay soo mareen farsamayaqaanada sanado, dhibaatada magdhowga masaafada ayaa la xaliyay. Gaadiidka TCDD Co. tareenada ganacsiga [More ...]
Ogeysiiska Qaadashada: In lagu iibsado Parabolic Susta (TÜLOMSAŞ)
Turkey tareenka iyo Engine Industry Inc. Iibsiga iibsiga si isweydaarsi Mawduuca hindisada iyo arrimaha la xiriira gorgortanka Qodobka 1aad- Macluumaadka Maamulka 1.1. Maamulka; a) Magaca: Turkey tareenka iyo Engine [More ...]